केपी ओलीले राखे शशांक कोइरालाको नामः खुराफातीका पिएचडी ! – Todays Nepal
केपी ओलीले राखे शशांक कोइरालाको नामः खुराफातीका पिएचडी !
नेकपा एमालेका अध्यक्ष के पी शर्मा ओली स्वास्थ्य परिक्षणका लागि थाइल्याण्ड जाने क्रममा त्रिभ’वन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसंग संक्षिप्त क’रा गर्दै । तस्वीर : रोशन सापकोटा
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काँग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालामाथि ‘खुराफातमा फिएचडी’ गरेको आरोप लगाएका छन् ।
नियमित उपचारका सिलसिलामा बुधबार बैंकक उड्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ओलीलले कोइरालालाई लक्षित गरी ‘खुराफातीका फिएचडी डाक्टर’ को आरोप लगाएका छन् ।
उनले खुराफातका पिएचडीहरुले बाम गठबन्धन भत्काउन निरर्थक मिहेनत गरिरहेको भन्दै त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे । ‘कतिपय खुराफाती विद्यामै डाक्टरी गरेकाहरू बाम गठबन्धन टुटाउन लागेका छन्’, ओलीले भने, ‘वाम एकता भाँड्ने निरर्थक अभ्यास र मिहिनेत नगरे हुन्थ्यो ।’ केसी समयअघि कोइरालाले एमाले र माओवादीबीच फाटो पार्नु काँग्रेसको घोषित उद्देश्य भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही सन्दर्भमा ओलीले कोइरालाको कटु आलोचना गरेका हुन् । आलीले बामपन्थी मिलेकामा नआत्तिन आग्रह गरे ।
अरुलाई मिल्नबाट रोक्न अरुका आन्तरिक मामिलामा नाङ्गै हस्तक्षेप नगर्न ओलीले चेतावनी दिए । ‘एकता देख्न नसक्नेहरु तर्सिएर देशलाई अस्थिरतामा धकेल्न , स्थिरतातर्फ जान नदिन खुलेआम घोषणाका साथ प्रतिक्रियावादी भूमिकामा उद्धत भएको देखिन्छ’, ओलीले भने, ‘म सबैले सुन्ने गरी भन्न चाहान्छु प्रयासहरू सफल हुने छैनन् ।’
ओलीले बाम एकता हुँदैन भन्नेहरुले ‘घाम ताप्ने’ टिप्पणी गरे । ‘खुराफातीमा विद्यावारिधीहरूलाई म भन्दिन चाहान्छु यिनका बुद्धिले यसपटक घाम ताप्छ । पार्टी एकता हुन्छ ।’ उनले एकतापछिको नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेबारे सञ्चारकर्मीको जिज्ञाशामा हतारमा जवाफ दिन जरुरी नभएको भन्दै टारे । उनले आफूहरुलाई नेताको देश र चिसो भूइँमा बस्न बाध्य जनताको व्यवस्थापनको चिन्ता रहेको टिप्पणी गरे ।
दाइजो नल्याएको निहुँमा घरबाट निकालीइन गीता , बिरोध स्वरूप सेयर गरौ
योनीमा गरिने चुम्बन भन्दा यो भागमा गरिने चुम्बनले १०० गुणा बढी सेक्स संवेदनशील बनाउँछ